Meganoid 2017 wuxuu ka bilaabmayaa inuu noqdo qiimo sare ilaa freemium si aad u tijaabiso | Androidsis
Meganoid 2017 ma ahan ciyaar cusub oo ku saabsan Android, laakiin hadda waad isku dayi kartaa waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah inay noqotay bilaash, laakiin leh xayeysiin, maalmo ka hor. Madal dhan oo ficil ah oo lagu garto farshaxankeeda weyn ee pixel iyo inuu ka yimid OrangePixel, oo ah istuudiyaha jirka iyo nafta u ah ciyaarta noocan ah
Badanaa dhammaan ciyaaraha OrangePixel waa la bixiyaa, laakiin waxay umuuqataa inay badalayaan siyaasada si ay u arkaan sida freemium uu uga adkaado qiimaha; in kasta oo ay weli jiraan istuudiyayaal badan oo doorbidaya inay caadaystaan ​​ciyaartoydu inay bixiyaan dhammaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin sida ku taal Dooxada weyn ee Stardew.
1 Heerarka si kadis ah loo soo saaray, laakiin si aad u wanaagsan ayaa loo gaadhay
2 Waxay leedahay xoogaa "roguelike" this Meganoid 2017
3 Adduun la halaago
Heerarka si kadis ah loo soo saaray, laakiin si aad u wanaagsan ayaa loo gaadhay
Haddii ay jirto hal shay oo Diablo 2 lafteeda u aasaasay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ARPGs waqtiga oo dhan, waxay ahayd awooddeeda ah inay soo saarto heerar aan kala sooc lahayn taas oo aan lahayn iota firfircoonaan iyo ciyaar si xeel dheer loo sharraxay; ha moogaanin Ibliis aan dhiman oo cusub iyo muuqaalkiisa gameplay. Kulamo badan oo lagu tijaabinayo jiilkan aan caadiga ahayn ee heerarka, sida ku dhacdo Deeprealm, waxay luminayaan "barta" kuwa loogu talagalay gacanta oo inta badan aad loo sharaxay.
Meganoid 2017 wuxuu leeyahay mid sifiican loo sharaxay, laakiin kan kadis ahaan loo soo saaray. Taasi waa, waxaad ku dhowaan doontaa dareenka ah in mid kasta oo ka mid ah heerarka Kuwa aad la ciyaareyso waxay ahaayeen gacanta naqshadeeye halkaas dhigay, cadawgaas dhanka kale ah iyo walxo taxane ah oo badanaa keena khibrado ciyaar deeqsi ah.
Meganoid 2017 waa a goobaha waxqabadka oo aan ku adeegsan doonno hub kala duwan, iyaga sii wanaaji oo xitaa soo hel aalado cusub oo kugu kaxayn doona ficilo kala duwan.
Waxay leedahay xoogaa "roguelike" this Meganoid 2017
Mid kale oo ka mid ah dhinacyada soo jiidashada leh ayaa ah inaan wajaheyno wax yar roguelike. Taasi waa, haddii aad dhimatid, waad dib u bilaabi doontaa. Tani waxay ka dhigan tahay inaad si adag u shaqeyn doontid si halyeeygaagu u sii wado helitaanka dhammaan waxyaabaha la soo uruuriyey ee aad ku qiimeyn karto
Waxaanan ka hadlaynaa waxaad awoodi doontid hel jetpacks, kabaha anti-culeyska iyo taxane kale oo farshaxan ah oo lagu baashaalo. Waxa kale oo jira meelo qarsoodi ah oo loogu talagalay barxad ficil ah oo ciyaar kasta oo aan ugu dhowaan karno inaan fiiro gaar ah u yeelano dareenkeenna si aan u ogaanno waxa aan uga tagnay baaritaanka.
Tani waa mid kale oo ka mid ah wejigiisa ugu fiican cinwaan cayiman oo aan ugu dambeyntii haysanno freemium. Sidan ayaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ogaato shaqada farsamada iyo muuqaalka weyn ee istuudiyahaan qabto iyo inta cibaado leh ee ay geliyeen.
Adduun la halaago
Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee Meganoid ayaa ah adduunka waa la burburin karaa. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad isticmaashid firfircoonaanta, ka dib marka uu qarxo, waxaad arki doontaa sida booska loogu meeleeyay horay loogu sii wado si xitaa iftiinka qolka looga waayo. Meganoid 2017 lafteedu waa khibrad ciyaar qurux badan oo ku saleysan cayaaraha ugu wanaagsan qaabkan.
Farsamo ahaan waad istaagi kartaa sida wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa jilaaga u yahay iyo sida saamaynta kamaradaha loogu daro si aan u leenahay qunsuliyad iyo khibrad arcade. Tan waxaan ku dari karnaa dhammaan weynaanta heer muuqaal ah si ay u noqdaan ciyaar laga barto isticmaalka farshaxanka pixel-ka. Saamaynta iftiinka iyo naqshadeynta mid kasta oo ka mid ah heerarka ayaa ah mid cajiib ah; iyo in si aan kala sooc lahayn loo soo saaray. Dareenkan, Meganoid 2017 ayaa tusaale u ah sida ciyaarta ay tahay in loogu qaabeeyo nooca luqadda aragga ah.
Meganoid 2017 waxaad ku leedahay hada laga bilaabo bilaash, inkasta oo xayeysiinta, sidaa darteed waxaad ku raaxeysan kartaa ficil ficil dhab ah. Cinwaan ka yimid OrangePixel si loo tijaabiyo in moodeelka ganacsiga freemium uu ku habboonaan doono iyaga iyo kan ka sii sarreeya. Jirrabku waa mid aad u weyn oo daraasad sidan oo kale ah oo kaliya lagu bilaabay qiimo, ayaa ka dhigtay boodboodku inuu lacag la'aan noqdo.
Farshaxan weyn oo pixel ah
Dhaqdhaqaaqa jilayaasha iyo dhaqdhaqaaqa
Jiil weyn oo heerar kala sooc ah
Meganoid (2017) Bilaash
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Meganoid 2017 wuxuu noqonayaa mid bilaash ah, laakiin xayeysiinta: waxaan ku dhex maraynaa dib u eegista
Si fudud ugula soco cuntadaada Foodvisor, barnaamij aad u dhameystiran aadna waxtar u leh